Lufthansa dia manidina voalohany any Paris-Orly avy any Munich
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa dia manidina voalohany any Paris-Orly avy any Munich
Nanomboka ny 16 martsa Lufthansa dia hampiditra ny seranam-piaramanidina Paris Orly (ORY) amin'ny fandaharam-potoananany sidina voalohany. Amin'ny fandaharam-potoanan'ny ririnina 2019/20, ny Bombardier CRJ900 dia hiainga indroa isan'andro manomboka any Munich ka hatrany amin'ny renivohitra frantsay. Ny sidina maraina, LH 2244 dia nandao an'i Munich tamin'ny 6:50 maraina, ny sidina LH2214 tamin'ny 17h 35 hariva Ireo mpandeha avy any Paris-Orly dia afaka tonga tao Munich amin'ny 10:30 maraina sy amin'ny 21:10 hariva. Izany dia manome fifandraisana tena tsara amin'i Amerika Avaratra, Japon ary India amin'ny maraina ary mankany Azia sy Mexico amin'ny hariva.
Ny sidina mankany Orly dia mameno ny sidina 40 isan-kerinandro nataon'i Lufthansa eo anelanelan'ny Munich sy Paris Charles-de-Gaulle, izay manome fifandraisana lavitra amin'ny renivohitra frantsay na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. “Paris no iray amin'ny toerana itodiana indrindra eto an-tany ho an'ny Vondrona Lufthansa. Miaraka amin'i Paris-Orly, sambany ireo vahininay dia manana fifandraisana mivantana avy any atsimon'ny renivohitra ka hatrany amin'ny foibenay Munich, ”hoy i Wilken Bormann, CEO Hub Munich. Ny seranam-piaramanidina Orly dia misy sivy kilometatra atsimon'i Paris ary mora ny fitateram-bahoaka. Tamin'ny taon-dasa, Orly dia nanana mpandeha 33 tapitrisa.
Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok dia nanonona General Manager vaovao
Ahoana no ataon'i Sierra Leone amin'ny làlana haingana mankany amin'ny fizahantany Safer any Afrika